Na-agbanwe agbanwe, igwe na-agbanwe agbanwe na-arụpụta ya na ndị na - ebunye ya - China
JSG-Type Enwekwukwa Conduit
JSG sooks bụ a galvanized ígwè waya na ezi corrosion eguzogide braided na mgbidi isi nke JS tube, na nwere ezi okpomọkụ na-eguzogide, eji na elu okpomọkụ gburugburu ebe obibi.
The owuwu nke ịkwanyere / Pu sheathing metal conduit bụ warara-ọnya galvanized dara conduit, risịrị profaịlụ ịkwanyere sheathing na Zinc plated ígwè belt asọfe, risịrị Ọdịdị, TPU sheathing. Ọkụ na-ere ọkụ bụ V0 (UL94). Ogo nchebe bụ IP68.
Nkọwa nkenke Usoro nchekwa bụ IP40. Njirimara nke igwe eji eme ihe na-agbanwe agbanwe, gbatịa, na-egbochi mgbochi mkpakọ. Ihe owuwu a bu nkpuru ahihia nke zinc, profaịlụ a na-etinye ya na uzo ozo.
Igwe anaghị agba nchara Conduit
Ngwongwo igwe anaghị agba nchara bụ akụkụ dị mkpa na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ. A na-eji hoses igwe anaghị agba nchara dị ka waya na eriri nchedo eriri maka wires, eriri, akara ngosi akụrụngwa akpaaka, na hose mmiri ịsa ahụ obodo, yana nkọwa sitere na 3mm ruo 150mm. A na-ejikarị eriri igwe na-acha nchara nchara (nke dị n'ime 3mm-25mm) mee ihe maka nchebe nke ihe mmetụta sensọ nke onye na-achị ngwa ngwa ziri ezi na nchebe nke sekit ihe mmetụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Metal conduit na ịkwanyere Sheathing
Igwe nchebe a na-eji wires na eriri na mpaghara dị iche iche bụ ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ PVC, nke na-enweghị ike ichebe wires na eriri, kamakwa igbochi ọkụ ọkụ eletrik; ha nwekwara ike ịhazi ahịrị ma nweta mmetụta mara mma.
Metal iduzi na Pu Sheathing
A na-eji hoses na-acha uhie uhie na ihe ndị e ji ígwè rụọ, nke a na-etinye akwa akwa nke PU tinyere concave na convex elu nke isi nke mgbidi tube. N'ihi uru nke ịdị arọ dị mfe, mgbanwe dị mma, ike njikọ na ngwa, arụmọrụ eletriki, nkwụsi mmanụ, nguzogide mmiri, wdg, a na-ejikarị eriri igwe mkpuchi plastik n'ọtụtụ ebe na ike, kemịkalụ, metallurgy, ụlọ ọrụ ọkụ, igwe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.